त्यो अन्तिम रात जब महरा परिवारले रोल्पाको सानो घर सधैंको लागि छोडेर हिंडे.................. - Himali Patrika
त्यो अन्तिम रात जब महरा परिवारले रोल्पाको सानो घर सधैंको लागि छोडेर हिंडे………………
हिमाली पत्रिका ६ माघ २०७६, 6:01 am
बिस्तारै झ्याउँकीरी र मच्छेडको संगीतयात्रा शुरु भइसकेको छ । २०६२ बैसाखको एक साँझ, यतिखेर हामी दक्षिणी पाल्पाको गोठादीको हात्तिलुङमा छौं ।
दिदी प्रगति अर्थात कुश्मा महरा । एक जनकलाकार, सफल गायिका, देश र दुनियाँ बदल्ने महान यात्रामा यात्रारत अविचलित यो द्धा ।
शायद यतिले मात्रै उनको सबै परिचय पूरा हुँदैन । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराकी कान्छी छोरी । वर्गसंघर्षको केन्द्र रोल्पाको महरा परिवार साँच्ची दश वर्षे जनयु द्धको इतिहासमै एउटा आदर्श, उदाहरणीय र सच्चा क्रान्तिकारी परिवार ।
यही नमुना परिवारकी सदस्य प्रगति पारिवारिक जीवनकै एउटा घुम्तीको वास्तविक कथा सुनाइरहेकी छिन् मलाई । जुन दिन उनीहरुले सपरिवार घर छोडे, त्यसपछि त्यो घरमा उनीहरु कहिल्यै फर्किएनन् ।
घर छोडेको त्यो अन्तिम रात, त्यसबखत उनीहरुको हालत कस्तो थियो ? दिदी प्रगति धाराप्रवाह बोलिरहेकी छिन्, म सुनिरहेछु–
समयले नेटो काटेको पत्तै नहुने रहेछ । त्यतिबेला म १२ वर्षकी मात्र थिए । मेरो बाल मस्तिष्कले सबै कुरा त बुझ्न सक्दैनथ्यो तर एउटा घटनाले बेलाबेला झस्काउँछ । त्यो अतीत वर्तमान बनेर उभिन्छ । त्यो भयानक दृश्य मेरो आँखा वरिपरि घुमिरहन्छ । अहिले पनि विगत सम्झन्छु, एकाएक मनमा प्रश्न उब्जिन्छ– ‘त्यो रात हामीले घर नछोडेको भए ?’
सदरमुकाम लिवाङकै छेउँमा हाम्रो घर थियो । बुवा कम्युनिष्ट भएकै कारण तत्कालीन सरकार र प्रशासनको आँखाको कसिंगर बन्नुभएको थियो । जनयु द्धको शुरुवात हुनुपूर्व नै बुवा भूमिगत बस्नुपर्ने बाध्यता भयो । जनयु द्धको थालनी भइसकेपछि त झन पुलिसको बिगबिगी बढ्न थाल्यो । त्यसपछिका दिनहरु यति कष्टप्रद बिते कि मैले शब्दमा व्यक्त गर्न नै सक्दिन ।
मेरो भाइ निर्माण, दाजु निर्मल र दिदी उन्नतिको पढाई बिग्रँदै गयो । बुवा घरमा आउने स्थिति नै रहेन । दुश्मनले हप्तामा ३ पटकभन्दा बढी खानतलासी लिने गथ्र्यो । घरमा आमा र हामी चार भाइबैनी गरी ५ जनामात्रै थियौं ।
हाम्रो लागि पुलिसको गा लीगलौज, कुटपिट र धाकधम्की त सामान्य भइसकेका थिए । दानवहरुको हुलले कहिले मध्यरातमा आएर ढोका हान्थे, कोठा.कोठा, बुइँगल र भकारी जम्मै हेर्थे । अन्नपात जहाँतहीं पोखिदिन्थे, केही नभेटेर रिसले मुर्मुरिदै फर्किन्थे । कहिलेकाहीँ एक दुईजना मात्रै साधारण भेष गरेर आउँथे ।
भाइ र मलाई चकलेट, बिस्कुट, कापी, कलम ल्याएर राख्न भन्थे तर हामी केही पनि राख्दैनथ्यौं । त्यसपछि उनीहरु एकआपसमा कानेखुसी गर्दै भन्थे, ‘माओवादीका बच्चाबच्चीहरु कति बाठा हुन्छन्, यी सालाहरु पनि ठूलो भएपछि माओवादी बन्ने त होलान् । यिन्लाई ?!’
हामी यसरी बाँचिरहेका थियौं कि मृ त्यु हरपल आँखै अगाडि घुमिरहन्थ्यो । कतिबेला घरमा आगो लगाइने हो ? कतिबेला गोलीले उडाइने हो ? सन्त्रास र भयको कालो बादल सधैं मडारिरहन्थ्यो । तारबारको जेलभन्दा पनि अझ कठोर जेलमा कैद थियौं हामी । सधैं दुश्मनका भरौटेहरु आएर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइरहन्थे ।
जब सूर्य अस्ताउँदै पश्चिममा हराउँथ्यो र कालो रातले पृथ्वीलाई छोप्दै ल्याउँथ्यो, हाम्रा मनहरुमा पनि सन्त्रासको कालो बादलले छोप्दै ल्याउँथ्यो । जब बिहान हुन्थ्यो, मन केही हलुका त हुन्थ्यो तर घरको भित्तामा मृ त्युपूर्जी टाँसिएको हुन्थ्यो ।
कहिलेकाहीँ अज्ञात स्थानबाट बुवाले पठाएका पत्रहरु आउँथे । हामीलाई ती पत्रले मार्गदर्शन गरिरहन्थे । पत्रहरु प्रेरणा बन्दथे । दु श्मनद्वारा लुछिएका, चुडिएका तनमनहरुमा मल्हमपट्टी हुन्थे ।
बुवाले पत्रमा लेख्नुभएको हुन्थ्यो, ‘अथाह दुःखकष्ट र अप्ठेरोको बीचबाट मात्रै हामी क्रान्तिकारी बन्न सक्छौं । सजिलोमा जो पनि बाँच्न सक्छ, रमाउन सक्छ तर कठिन अवस्थामा पनि जिउन सक्नुपर्छ । अवश्य दुश्मनले बेलाबेलामा सताउँछ होला, झुकाउन प्रयास गर्ला तर दुःखमा नआत्तिनु, दुश्मनसँग कहिल्यै झुक्नुहुदैन ।’
हामी बुवाले लेखेका पत्रहरु धेरैपल्ट दोहोर्याई तेहेर्याई पढ्थ्यौं र दुश्मनले नभेट्टाउने ठाउँमा लुकाएर राख्थ्यौं । हाम्रो बुवासँगको भेटघाट त्यही पत्रहरु नै हुन्थे ।
२०५४ साउन २९ गते शुक्रबारको दिन । वर्षायाम भए पनि त्यस दिन पानी परेको थिएन । साँझपख केहीछिन आँधीहुरी चल्यो । आकाशमा कतै–कतै बादलका छिर्काहरु देखिन्थे । घाम नअस्ताउँदै सदरमुकाम लिवाङ सुनसान भइसकेको थियो । कारण साँझ ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म कथित कफ्र्यू आदेश जारी गरिएको थियो । हामी सधैंझैं त्यस साँझ पनि सबेरै खाना खाएर सुतिसकेका थियौं ।
त्यो रात मेरो मानस्पटलमा अझैं पनि ताजै छ । शायद, मेरो मस्तिष्क चलचित्रको चक्का हो । चक्का निरन्तर घुम्दै जान्छ अनि हरक्षण र ती दृश्यहरु मेरो आँखामा क्रमैसँग आउँछन् ।
हामी ओछ्यानमा पल्टिए पनि निदाइसकेका थिएनौं । एक्कासी ‘ढ्याम्म’ कसैले ढोकामा जोडले लात्ती बजार्यो । ढोका हानेको आवाजसँगै ‘ए राँ डी ढोका खोल ।’ को एउटा कर्कश मानवरुपी पशुको आवाज पनि आयो ।
‘उफ !’ लामो सुस्केरा हाल्नुभयो आमाले । फेरि पनि कुकुरहरु आए, अब के के हुने हो ? हाम्रो मनमा सन्त्रास, भय र आ क्रोश एकैपटक उब्जियो । बाहिर झ्याल, ढोकामा लात्तीले हिर्काउने क्रम जारी थियो । अ श्लील शब्द बोल्दै राक्षसहरु आँगन, करेसा सबैतिर होहल्ला गरिरहेथे । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्थ्यो कि दु श्मनहरु धेरै आएका छन् ।
आमाले बत्ती बाल्नुभयो । हामी चार भाइबैनी पनि उठिसकेका थियौं । अझ यसो भनौं हामी सबै दुष्टहरुको कुटाइको लागि तयार हुँदैछौं । ‘गल्र्याम्म’ ढोका ढलेको आवाज आयो र आवाजसँगै मैमत्त दानवहरु ग्वारग्वारती भित्र छिरे । कोठा, भकारी, बुइँगल, भान्साकोठा सबैतिर तलासी लिए ।
पहिलेभन्दा त्यसदिन आएका दुष्टहरु बेग्लै थिए । कपडा पनि टाटेपाटे, अनुहार देख्दैमा ड रलाग्दो मान्छे खाने दानवजस्तो । ३÷४ जना आएर आमालाई झ म्टे, कपाल लु छ्दै राइफलको कुन्दाले हि र्काउन थाले ।
अरु २ जना आएर हामी ४ भाइबैनीलाई पनि गालामा बेस्सरी हि र्काए । भाइ डाँको छोडेर रुन थाल्यो । दुष्टहरुले भाइलाई झन अरु कुटे । दिदी, दाइ र म चुपचाप उभिइरह्यौं । आवाज निकालेर रोयौं भने झनै कुटाइ खानुपथ्र्यो । मन रोइरह्यो, आँखाभरि आँशु भरिएका थिए । दुष्ट हरुले आमालाई कुटिरहेको हामीले मुकदर्शक बनेर हेरिरहनुपर्ने भयो ।
‘छिटो भन् कहाँ छ ?’ – ‘थाहा छैन । के भनुँ ?’
‘माओवादीका नेता कहाँ बस्छन् ?’ ‘था छैन ।’
‘तेरो राँ डो कहाँ बस्छ ?’ – ‘था छैन ।’
उनले यति कुरा भनि सिध्याउँदासम्म रातको करिब ९ बजिसकेको थियो । बाल्यकालमा उनको जीवनमा घटेको घटनाको वृतान्त सुन्दासुन्दै म त कतिपटक रोएँ, रोएँ । त्यसबखत जूनको मधुरो प्रकाशमा मैले देखेँ उनको आँखाबाट पनि थोपा–थोपा अश्रुदाना झरिसकेका थिए ।
फेरि शुरु भयो बुट र कुन्दाको काम । केहीछिनपछि बाहिरबाट अर्को राक्षस आयो । शायद त्यो अलि ठूलो हुनुपर्छ । ‘केटाहरु हो, यसले भन्दिन । आज यो राँ डीलाई नै सुट गर्नुपर्छ, अनिमात्र सबै कुरा ठिक हुनेछ ।’
‘ए राँ डी कपडा लगा । केही भन्नु छ भने तेरा छाउरा छाउरीलाई भन् । केही दिनुछ भने पनि दिए हुन्छ । अब फेरि तेरो यिनीहरुसँग कहिल्यै भेट हुँदैन बुझिस् ?’ आमातर्फ फर्केर ठूलो दानव करायो । आमा मौन रहिन् ।
‘छिटो गर ।’
हामीबाट आमाको न्यानो काख र माया जबर्जस्ती खोसिँदैछ । मैले आमाको आँखामा हेरे । आँसु छचल्किएका थिए । सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो आमा आफ्ना प्यारा छोराछोरीप्रति जीवनभरिकै असीम माया ममता पोखिरहनुभएको थियो ।
मलाई झट्ट बुवाको याद आयो । बुवा अहिले कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ होला ? हाम्रो यो हालत, आमाको यस्तो अवस्था । मुटु भक्कानिएर आयो तर के गर्ने ? आमाको अँगालोमा झुण्डिएर बेस्सरी रुन मन नलागेको त कहाँ हो र ? तर, बीचमा दु ष्ट दानव उभिएको थियो ।
आमाले धौ–धौसँग भन्नुभयो, ‘राम्रोसँग बाँचेर बसे । नराम्रो काम कहिल्यै नगरे’ आमाको गला अ वरुद्ध भयो ।
बोल्दाबोल्दै दिदी प्रगतिले लामो सास फेरिन् । शायद उनलाई आमाको त्यो शब्द अहिले भर्खर भनेजस्तो लागिरहेछ । मानौं, उनी अहिले दुष्टको पञ्जामा परेकी आमाको अगाडि निरीह भएर उभिरहेकी छिन् । धाराप्रवाह उनको बोलीमा केही भिन्नता आएको छ अहिले । एकपटक खोकिसकेपछि उनले बाँकी बृतान्त फेरि शुरु गरिन् –
दुष्टहरुले आमालाई घि सार्दै बाहिर लिए । ‘आमा ऽऽ’ भाइ जोडले चिच्यायो । तर, हाम्रो वेदना सुनिदिने कोही थिएन । पत्थरको जस्तो मुटु भएका दुष्टहरुलाई के मतलब आमाको माया कति हुन्छ ?
एक्कासी एउटा करायो, ‘भागी, भागी ए त्यो र ‘ण्डी भागी ।’ अर्को आवाज आयो, ‘ठोक ठोक सालेलाई ।’
‘ड्याङ ऽऽ’ राइफल पड्किएको आवाज आयो ।
आमा ऽऽ हामी घरभित्रैबाट जोडले चिच्यायौं । आकाश खसेर थिचेझैं भयो । खैं त्यो बेलाको पीडा मैले कसरी भनुँ ? हामीभित्रै छटपटाइरह्यौं । बाहिर राइफल पड्किरहेको आवाज बढिरहेको थियो । कोही मकैबारीमा दौडिरहेको आवाज पनि आइरहेको थियो ।
दिदीले शंका गर्दै भन्नुभयो, ‘आमा भाग्नु भएजस्तो छ । आमा भागेको भए उल्टो रिसले हामीलाई नै मार्छन् दुष्टहरुले बरु हामी पनि भागौं ।’
हामी चारै भाइबैनी घरको पछिल्लो ढोकाबाट सुस्तरी बाहिर निस्कियौं । घरको करेसा हुँदै माथिल्लो बारीमा उक्लियौं र कान्ला–कान्लाबाट लुक्दै पर डाँडामा पुग्यौं । दुष्टहरु घर अगाडि र वरपर नै हल्ला गरिरहेथे ।
साउनको महिना भएपनि आकाशमा बादल देखिँदैनथ्यो । डाँडोमा एकछिन सुस्तायौं । जलजलाबाट बहेको चिसो सिरेटोले मुटुसम्म छोएर फर्कन्थ्यो ।
आकाशमा लाखौं ताराहरु टिलपिल–टिलपिल गरिरहेथे । जूनको धिमा प्रकाश धर्तीमा छरिएको थियो ।
घरबाट त निस्कियौं तर कहाँ जाने ? रातको करिब २ बजेको छ । ‘रानो बिनाका मौरीझैं’ हाम्रो बेहाल थियो । आमालाई के भयो होला ? कतै दुष्टले …? हाम्रो यो हालत, बुवा कहाँ हुनुहुन्छ होला ?’
केही उपाय नआएर त्यसै बसिरहेका थियौं, जूनको मधुरो प्रकाशमा नजिकै एउटा कालो वस्तु हिडिरहेको देख्यौं । शुरुमा त पुलिस आयो भनेर झस्कियौं तर अलि नियालेर हेर्दा हतियार पनि छैन ।
पुलिस नभएको निश्चित भएपछि आमा हुनुहुन्छ कि भनि त्यही कालो वस्तुको पछि–पछि दौड्यौं । हामी दौडेको आवाज सुनेर त्यो झन् दौड्यो ।
दौडाई आमाको जस्तै लागेर दिदी कराइन्, ‘आमा ऽऽ’ तर त्यो झन–झन पो दौड्यो । दिदी फेरि पनि कराइन् ।
‘को हो ?’ प्रत्युत्तरमा दौडिने वस्तु करायो ।
त्यो अरु कोही नभएर आमा नै हुनुहुन्थ्यो । हामी आमा भएतिर हाम फाल्दै गयौं र अँगालोमा बाँधियौं ।
आमालाई छोपेर लगिसकेपछि हामीले फेरि मिलनको आशा त के कल्पनासमेत गरेका थिएनौं । कहिलेकाहीँ चान्स पनि कस्तो अचम्मको हुँदो रहेछ । दुष्टहरुको घेराबन्दीबाट हामी सबै सकुशल बाहिर निस्किसकेका रहेछौं ।
दुश्म नद्वारा घरबास लुटिँदा, तनमन चिथोरिँदा पीडा त अवश्य थियो तर मृ त्युको मुखबाट फर्किएर आएझैं आमालाई पाउँदा खुशीले बेसरी रोयौं । घरमा भने दुष्टहरु आ तंक मच्चाइरहेथे । सामानहरु यत्रतत्र फालेको मधुरो आवाज सुनिन्थ्यो ।
हो, लिवाङस्थित हाम्रो त्यो सानो घर, जसलाई सधैंको लागि छोडेर हिड्यौं । त्यो भन्दा कैयौं गुणा विशाल घर, लाखौंलाख उत्पीडित, उपेक्षित जनसमुदायको आस्था र विश्वासको धरोहर महान् क्रा न्तियात्राको विशाल घर । जहाँ सधैं सन्त्रासको घेराभित्र बाँचिरहनु पर्दैन, खुल्ला आकाशमा पखेटा फटफटाउँदै उड्ने पंक्षीजस्तै स्वतन्त्र जिउन सकिन्छ ।
माडी आफ्नै धुनमा बगिरहेथ्यो । जलजलाको चिसो सिरेटोले मुटुसम्म छोएर फर्किन्थ्यो । लाखौं ताराहरु हाम्रो अथाह पीडा र क्रन्दनमा असीम माया र सहानुभूतिसहित शीतका थोपा खसालिरहेथे ।
लेखनमिति : २०६२ बैशाख १३, गोठादी पाल्पा
(पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा यतिबेला डिल्लीबजार सद रखोरमा हुनुहुन्छ । उहाँको त्या ग, समर्पण, संघर्ष र सिङ्गो परिवारले क्रा न्तिका लागि गरेको त्या ग पानीको फोकाजस्तो देखिएको छ । उहाँ आफै ओझेलमा परेजस्तो देखिएको छ । यद्यपि, सिङ्गो १० वर्षे जनयु द्धको पृष्ठभूमिमा देखिएका निष्ठा, त्याग, बलि दान र समर्पणको अनेकौं उदाहरणमध्ये स्वयं महरा पनि एक थिए । महरा परिवारले २०५४ साउन २९ गते घर छोड्दाको कारुणिक, मर्मस्पर्शी र पीडादायी क्षण अर्थात अन्तिम रातलाई यसरी आफ्नो शव्दमा उन्नुभएको छ डिल्ली मल्लले । हाल प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका पत्रकार तथा साहित्यकार मल्लले यु द्धकाल अर्थात २०६२ बैशाख १३ गते गोठादी पाल्पामा बसेर यो संस्मरण लेखेका हुन् ।)